U isticmaal Android -kaaga sidii iskaan -qaadiyaha la qaadan karo adigoo u mahadcelinaya CamCard iyo Scan2PDF | Androidsis
U adeegso Android-kaaga sidii sawir-qaade la qaadan karo mahadnaqa CamCard iyo Scan2PDF
PiliHuertas | | Codsiyada Android, Tafatirka PDF
Yaa yiri moobaylka looma beddeli karo scanner la qaadan karo? Hubaal haddii ay tahay a Android waa suurtogal, maadaama ay suurtogal tahay waxyaalo badan oo kale, taas oo ah waxa taleefanka casriga ahi u yahay. Hagaag, kan scanner -ka la qaadan karo waxay iila muuqataa fikrad aad u wanaagsan iyo in wax ka badan hal mar ay faa iido yeelan karto, oo kaliya maahan wakiilada 007 ee mustaqbalka, laakiin sidoo kale waqtiyada “caadiga ah” ee lagu xaqiijin karo shaqada ama daraasadda. Markaa waxaan u dhaafayaa laba arji oo suurtogal ka dhigaya, doorashada adiga.
1 CamCard Lite - Kaarka Ganacsiga R ee Android ee AppBrain
2 CamCard - BCR (Galbeedka) loogu talagalay Android on AppBrain
3 Scan2PDF Mobile Lite ee Android ee AppBrain
CamCard Lite - Kaarka Ganacsiga R ee Android ee AppBrain
Codsiga ugu horreeya ee aan arki doonno waa CamCard taas oo noo saamaxaysa in aan digitize dhigno oo aan maamulno kaararkeena ganacsi ee dhabta ah, shaqo waxtar u leh kuwa haysta kaarar badan meel walba oo mar kasta oo ay mid raadsadaan waalan. Waxaa laga helaa labadaba nooca Lite iyo nooca lacag bixinta, loogu talagalay $ 14.99.
CamCard - BCR (Galbeedka) loogu talagalay Android on AppBrain
Scan2PDF Mobile Lite ee Android ee AppBrain
Laakiin haddii aad rabto inaad iska baarto bog dhan, markaa si fiican ayaad u adeegsanaysaa Scan2PDF Codsi dhowr jeer waxtar u yeelanaya, tusaale ahaan haddii aad u baahan tahay inaad qof u dirto dokumenti oo aadan haysan koobi. Midkani sidoo kale wuxuu leeyahay nuqul Lite ah oo dhigaya summad -dhexda dhexda iyo mid la bixiyay, £ 3.99 (€ 4.5).
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Tafatirka PDF » U adeegso Android-kaaga sidii sawir-qaade la qaadan karo mahadnaqa CamCard iyo Scan2PDF
Waa inaad isku daydaa IntSig + CamScanner, waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee aan la kulmay.
Iyo sidoo kale nooca BILAASHKA ayaa aad u fiican.
Oo maxay ku kala duwan yihiin scan2pdf iyo sawir fudud qaabka jpg? Sababtoo ah waxaan qiyaasayaa inay ka badnaan doonto kaliya qaabka faylka ...
Ku jawaab Campu
waxay umuuqataa wax iska cad inay jiraan farqi aad u badan oo u dhexeeya sawir iyo dukumenti la marsiiyey!
Ma rabtaa inaad cusboonaysiiso iPhone 2G / 3G? Ku rakib Android 2.2
Noqo qofka ugu horeeya ee cusbooneysiiya Gingerbread, diyaarso Nexus One-kaaga